'Iiraan oo hub ku daabushay Soomaaliya iyo Yemen' - Worldnews.com
Dad khubura ah ayaa baaray hubkan oo saarnaa maraakiib lagu qabtay ayaga oo maraya badda, waxaana lagu ogaaday
Faah faahin Dooni siday hub sharci darro ah oo lagu qabtay xeebaha Puntland [Sawirro]
BOSASO, Puntland- Ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee PMPF loo yaqaano ayaa gacanta ku dhigay Doon siday hub sharci darro ah oo ka timid dhinaca waddanka Yemen, waxaana...
Gareowe Online 2017-09-13
Israel ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay duqeeyeen saldhigyo milatariga Iran ay ku leeyihiin gudaha dalka Syria, ayaga oo ka jawaabaya gantaaallo Iran ay...
Gareowe Online 2018-05-10
MUQDISHO, Soomaaliya - Hub laga soo bililiqeystay Xeradii uu ka baxay Imaaraadka ee Jeneraal Gordan Isniintii lasoo dhaafay, ayaa lagu kala iibsanayaa si qarsoodi ah...
Gareowe Online 2018-04-26
MUQDISHO, Soomaaliya - Hub laga soo bililiqeystay Xeradii uu ka baxay Imaaraadka ee Jeneraal Gordan Isniintii lasoo dhaafay, ayaa lagu kala iibsanayaa si qarsoodi ah suuqyada magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 600 oo qori oo ah nooca AK-47, islamarkaana ay ku qoran tahay Caalamadda [SO XDS], oo muujinaysay inay leeyihiin Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, ayaa laga iibiyay...
Dowladda Iiraan:Midowga Yurub kama bixi doonaan Heshiiska Niyukleer
Wasiirka arrimaha dibaddaIran, Maxammad Javad Zarif,ayaa sheegay in uu qiyaasayo in Mareykanka ay isaga tala bixi doonaan heshiiskii caalamiga ahaa ee lagu xaddidayay howlaha Niyukleerka Tehran. Golaha Kongreska Mareykanka ayaa bisha soo socota billaabi doona in mar kale cunaqabatayn lagu soo rogo Iiran haddii madaxwayne Trump uu sheego in Tehran ay ku guuldareysatay in ay u...
Maraykanka oo Iran eed dusha uga tuuray
Xoghayaha difaaca Mareykanka, Jimm Matti, ayaa sheegey in meel kasta oo khilaaf ka jiro ay Iran ku lug leedahay. Isaga oo ku sugan wadanka uu loolanku ka dhexeeyo Iran ee Sucuudiga ayuu sheegey in ay lagama maarmaan tahay in wax laga qabto dedaalka ay Iran ugu jirto carqaladeyta...
Trump oo cunaqabatayn saaray Iran ka dib markii ay gantaal tijaabisay
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabateyn ku soo rogay Iiran ka dib markii ay dhawaan tijaabisay gantaal. Waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa shaacisay tallaabooyin ka dhan ah 13 qof iyo daraasiin shirkado oo dalka Iraan laga leeyahay. Netanyahu oo Iran ku eedeeyay tijaabinta gantaal Iran 'oo samaysanaysa maraakiib ku shaqaysa...